Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Cusbitaalka Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Isbitaalka
Qalabka cisbitaalka waxa loola jeedaa agabka caawiya ama alaabta loo isticmaalo daawaynta macno balaadhan. Dhalo yar yar oo daawo ah, caag, dhalada isha, iyo dhalada daawada dareeraha ah ayaa ah qaybta sahayda caafimaadka. Sida weyn ee qalabka waaweyn ee looga baahan yahay qalliinka, qalabka jirdhiska ayaa sidoo kale lagu daray.
Qalabka Isbitaalka Bailikind Qalabka tayada la isku halayn karo, noocyo kala duwan oo badeecooyin ah, oo ay ku jiraan sahayda caafimaadka, qalabka lagu baaro caafimaadka, baaritaanka caafimaadka, alaabada kalkaalinta iyo alaabada kale.
Isticmaalka sayniska ee Qalabka Cusbitaalku waa cabbir muhiim ah si loo xaqiijiyo badbaadadayada shakhsi ahaaneed iyo caafimaadkayaga. Baili Kant daryeelka nolosha iyo caafimaadka!
Diyaarinta Dharka Dhaawaca
Qalabka dhaymada dhaawaca waa faashad loo isticmaalo in lagu daboolo nabar, boog, ama dhaawac kale. Noocyada dhaymada boogaha ayaa ah kuwan soo socda: 1. Labbisyada qarsoon (dharka dhaqameed), kuwaas oo si qarsoodi ah u daboola nabarka oo nuugaya dheecaanka, ilaalinta xaddidan ee dhaawaca. 2. Labbisyada isdhexgalka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo is dhexgalka u dhexeeya labiska iyo boogta, sida nuuga dheecaanka iyo walxaha sunta ah, u oggolaanaya beddelka gaaska, oo sidaas darteed abuurista jawi ku habboon bogsashada; Dhismaha bannaanka ee xannibaadda, ka-hortagga duulaanka microbial ee deegaanka, ka-hortagga caabuqa is-goysyada nabarrada, iwm.
Qalabka saldhigga ah ee Cajaladda Xabagta Caafimaadka waa saxarka alwaax saafi ah walxo dabiici ah, aan sun ahayn oo aan xanaaqin, oo leh hawo wanaagsan. Cajaladda daboolka caafimaadku waxay leedahay jilicsanaan wanaagsan, fududahay in la furo oo si sahlan loo shaqeeyo; Waxay ku habboon tahay jeermiska suufka nooca iskutallaabta ah ee loo isticmaalo qaybaha caafimaadka. Uumiga cadaadiska, oksaydhka ethylene, jeermiska formaldehyde, iwm. Xidhmada nadiifinta ee isbitaalka, oo ku habboon qolka sahayda nadiifinta dhexe, qolka qaliinka, waaxda stomatology, iwm.
Labbiska caafimaadka waxaa loo isticmaali karaa faleebo isku mid ah oo kiliinikada ah, faleebo xididka oo dawo ah iyo dhiig, xal nafaqo ama dhalmo degdeg ah, si wax ku ool ah looga hortago infekshinka isdhaafsiga. Alaabtu waa mid aan sun ahayn, sterile, pyrogen-free iyo hemolytic. Alaabtaan waxaa lagu jeermis-dilay ethylene oxide, waa nadiif ah oo aan lahayn pyrogen, waxaana loo isticmaali karaa kaliya hal mar.
Saliidda Bogsiinta Dhaawaca
Boomaatada bogsashada nabarka waa boomaato waxayna ka kooban tahay maaddooyin aan lahayn saameyn farmaajo. Maaddooyinka jidhka ku jira lama nuugi karo, sahay nadiif ah. Kareemada boomaatada bogsiiya waxay u dhaqmaan sidii xannibaad jireed iyagoo sameysanaya lakab ilaalin ah oogada boogta. Nabarrada yaryar, nabarrada, jeexjeexyada iyo nabarrada kale ee dusha sare ah iyo daryeelka maqaarka ku wareegsan.
Faashad daawadu waxay ka samaysan tahay fiilooyinka suufka ah ee ka yimaadda iniin bislaaday oo aan si isdaba joog ah loo farsamayn, lagu miiqiyay maro tol ah, ka dibna la googooyay, la cadeyay oo lagu sifeeyay faashad goysay si loogu isticmaalo caafimaadka. Alaabooyinka faashashka dawada guud ahaan waxay leeyihiin qaab laalaab iyo durbaan.
Qaybta ugu muhiimsan ee khamriga caafimaadku waa ethanol, waana isku dar ah. Khamriga dawada waxaa lagu sameeyaa saccharification, halsano iyo nadiifinta dhirta istaarijka ah, taas oo u dhiganta habka samaynta khamriga, laakiin heerkulka dareeraha ayaa ka hooseeya kan khamriga, wakhtiyada wax-soo-saarka ayaa ka badan kan khamriga, kakoobka khamriga ayaa sarreeya. , iyo alaabta la dhammeeyey waa mid sarreeya. Waxaa jira ethers iyo aldehydes ka badan khamriga ka sokow khamriga, sidaas darteed lama cabbi karo, laakiin waxay la xiriiri kartaa jidhka bini'aadamka arrimo caafimaad. Waa wax soo saarka dhirta.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Isbitaalka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Isbitaalka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Isbitaalka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.